Pakistan: Nakatona indray ny blogspot.com · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2019 7:19 GMT
Nitatitra ny The Don’t Block The Blog androany fa nosakanana tao Pakistana indray ny fidirana amin'ny sehatra fibilaogiavana malaza blogspot.com, izay an'ny Google Inc:
Nandritra ny efa-bolana (hatramin'ny volana May 2007) dia soa ihany fa nanova ny adiresy IP amin'ny lohamiliny Blogspot ny Google. Tsy voafaritra ho sokajiana ho voararàn'ny sivana ao amin'ny Pakistan Internet Exchange ny adiresy IP vaovao. Androany, noho ny antony tsy fantatra, niverina tampoka tao amin'ny adiresiny IP voalohany ny Google, izay tao anatin'ny lisitry ny fanakanana nanomboka tamin'ny Martsa 2006. Nahatonga ny fanakanana ny fifamoivoizana rehetra amin'ny aterineto ao amin'ny anarana-tsehatra blogspot.com izany fihetsika izany. Tsy afaka mamaky na mifandray na dia iray amin'ireo tranonkala ireo ny mpamaky bilaogy an-tapitrisany any Pakistana.
Natomboka ny fanentanana “Don’t Block The Blog” ho setrin'ny fandraràna napetraky ny Pakistan Telecommunication Authority (PTA) mihatra amin'ny Blogspot.com, sehatra famahanam-bilaogy, herintaona mahery lasa izay, tamin'ny 3 Martsa 2006.
Azonao atao ny mamaky ny tafatafa teo aloha nifanaovana tamin'i Omer Alvie, mpiara-manorina ny (DBTB) momba ny fandraràna sy ny hetsika Pakistaney ho fanohanana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera.
Ity lahatsary flash ity dia novaina tao amin'ny famoahana Powerpoint nataon'i Dr Awab Alvi ho an'ny kaoferansa “The Battle for the Internet” na ny Ady ho an'ny aterineto (Azo jerena ato ny tahiry orizinaly ny fampahafantarana nataony)